Nyochaa ndekọ & Ngwọta njikwa ndekọ | Motadata
Ezigbo ọgụgụ isi iji chedo ngwa gị
Nweta nghọta nwere ike ime n'ọ̀tụ̀tụ̀ site na ịnakọta, nyocha, ilele anya, na iji metrik chọpụta data ndekọ iji nweta ọhụhụ zuru ezu.
Nweta nghọta site na ndekọ ndekọ gị nke ahụ Na-eduga n'omume
Site na arịrịọ ad-hoc na iju mmiri nke ihe merenụ, ọ na-esiri ndị otu Nkwado IT ike imeri ma dozie ha tupu ha ebute mmebi SLA ọ bụla. Na mgbakwunye, ọ na-abụ ihe siri ike ịnye nkwado arịrịọ ndị a na-arịọ n'ofe ọwa.
Nchịkọta ndekọ nke ọma
Megharịa usoro nke ịnakọta na ịtụgharị ihe omume ndekọ site na isi mmalite dị iche iche na-enweghị nsogbu nke ntinye aha na nchekwa.
Nleba anya n’ezie
Mee nlekota log na ezigbo oge na ndị na-ahụ maka sistemu nche tupu ha eche ọdịda a na-apụghị izere ezere ihu.
Chọpụta ụyọkọ na ihe ọjọọ
Mgbe ezigara data ndekọ, Motadata nwere ike hazie ha wee kpokọta ndenye ndenye ozugbo maka nghọta ngwa ngwa & nchọpụta nsogbu.
Nchịkọta Ndekọ Centralized
Nweta data ndekọ sitere na gburugburu ebe dị iche iche banye na dashboard jikọtara ọnụ site na iji ihe nnọchite na ụzọ ndị na-enweghị onye nnọchite wee mepụta otu isi iyi nke eziokwu.
Nweta nnabata n'ihe gbasara njide log, nyocha na amụma ndekọ ndekọ aha.
Ọrụ njikwa ndekọ ọnụ ọgụgụ na-eji onye nnọchi anya anyị siri ike nke nwere ike itinye data n'ụdị ọ bụla.
Mmeba data na ntughari dị omimi
Wepụ ndekọ n'ụdị ọ bụla site na iji ihe nzacha dị ike nwere nkwado ịdọrọ & dobe.
Mebaa data log gị site na iwepụta ozi bara uru site na isi mmalite data omenala.
Wepu ntukọba na terabytes nke data log site na iji nzacha dabere na okwu na nchọ siri ike.
Nchọpụta Anomaly na nchịkọta
A na-achịkọta data etinyere iji chọta usoro iji chọpụta ihe adịghị mma.
Tụgharịa data igwe ka ọ bụrụ metrik enwere ike ị nweta nghọta azụmaahịa.
Jiri injin ML anyị mụta ụkpụrụ pụrụ iche na data ndekọ metụtara oke mperi yana usoro ndekọ.
Debanye aha Live ọdụ
Tinye ọdụ dị ndụ n'ọrụ site n'ịlele data ndekọ ahaziri ahazi ozugbo site n'ọtụtụ isi mmalite na enweghị nkwụsị efu.
Tụgharịa ngwa ngwa wee mara ihe mere n'ọnọdụ nke ahụhụ, mwepu ngwanrọ, ma ọ bụ ihe nchekwa.
Jiri anya nke uche hụ data gị
Nweta nhụta data ndekọ ozugbo n'ụdị chaatị na eserese wee chọpụta usoro maka otu oge.
Chọpụta mmebi nchekwa
Soro metrik dị egwu metụtara firewall wee nyochaa arụmọrụ ya nke ọma.
Igwefoto di ike
Megharịa ndekọ ndekọ akpaaka site na iji ndebiri akọwapụtagoro maka ọrụ ndị ama ama iji melite arụmọrụ yana chekwaa oge.
Mkpokọta ndekọ na-agbanwe agbanwe
Na-anakọta data ndekọ site na ngwaọrụ ezubere iche site na iji ndị nnọchite na ụzọ enweghị ọrụ iji tụọ ọrụ njikwa log.